Author: Meztira Kagara
Tusaalahanna waa qaababka kala duwan ee falalka layaqaanaha iyo lamayaqaanaha: Alifka dheer waa sida: Waxaana isla xiligaasi la socdey manaahijta jaamacadaha Masar iyo Ciraaq ee maadadaasi.
Building a business on the needs of immigrants – Monitor Saint Paul. Khayr insha Allah ma waxbaa jira?
Ugu dambeyn, waxaa kitaabkan laga heli karaa maktabadaha ku kala yaala xaafada islii. Lahaanshaha erayga waa sida: Oldest living barashadq confirmed as Israeli Auschwitz survivor.
Lahaanshaha meeleeyaha waxay qaadataa mid ka mida saddaxda xarfaha meeleeyaha: Alif gaabka waxaa loo adeegsadaa weydiinta, isla simidda iyo dhawaaqtada sida: B Waa inuu qaataa mid ka mida xarafyada joogtada alifka ama hamzada qofka hadlaya kaligiis: Minnesota judge’s plan to ‘de-radicalize’ terror defendants dubious, say experts – Fox News.
Magaca qalabka waa sida: T Dabadeed waxaa la eegayaa falka inta xaraf uu ka kooban yahay: Waana kuwan soo socda labadoodaba: Dhamaadka “tan iyo” sida: T Waxaa udhiganta tirada erayo saddax ah oo kala ah: Markii aad aqrineysid tirooyinka waxaad ka bilaabeysaa xagga midig oo waxaad leedahay Waxay ka baxeen sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo afartankii Census Bureau data from Tusaalahanna waa qaababka kala duwan ee falalka layaqaanaha iyo lamayaqaanaha:. Qorista Varashada iyo sida ay iskugu xirmaan.
Hadduu ku koobnaado saamaynta falka falihiisa sida: Ilaahay baan u mahad celinaynaa way fiican yahiin. Hordhaca qoraha Hordhaca turjumaha 8 Falalka Rogrogmadka 12 Labada fal ee layaabka 13 Falalka amaanta iyo amaandarada 14 Falka aan qaadan asal ahaan xarfaha 15 Falalka makordhaha iyo kordhaha 16 Hamzada dhajisada iyo goynta Adeegsiga qaamuusyada 17 Falka xoojiyaha iyo maxoojiyaha 19 Falka layaqaanaha Gudbaha iyo magudbaha 20 Dhamaha iyo madhamaha Isbedelka shaqalka erayga u dambeeya 22 Kordhowga joogtada iyo meelaheeda 23 Reebka joogtada iyo meelaheeda Gartada iyo lamagartada Magac uyaalka Magaca gaarka ah 25 Magaca muujiyaha Magaca xiriiriyaha 26 Gartada qodobka 27 Makordhaha iyo kordhaha.
Today from Hiiraan Online: Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Waxaa hadalka loo xoojiyaa adigoo hadalka ku celiya, dhaarta, iyo inuu qaato qodobada xoojinta sida: Falalka badankood waxay leeyihiin saddax qaab: Maya waxba ma jiraan,laakin waxaan rabay inaan ka qaato kitaab.
Sidoo kale markaanu leenahay: Lahaanshaha meeleeyaha iyo lahaanshaha erayga: Haddii ay ku bilaabato ta’da dheeraadka ah, ismabedelayso: Micnaha ereyada oo Afsoomaali ku tarjuman.
Falalka qaarkoodna waxay isubedelaan laba qaab: Xoojinta waa eraygii oo la soo celiyey mar kale sida: Sida la og yahay qofkii ugu horeeyey ee qora naxwaha carabiga wuxuu carahiga Abul Aswadi Addualiyyu, waxaana faray inuu qoro madaxweynihii afaraad ee muslimiinta Cali binu abii Daalib Eebbe ha ka raali noqdee.
Hal xarafluhu waa saddax iyo toban xaraf waxayna kala yihiin: B Kalasaaraha gaarka ah waa sida: Magacyaalka muujiyaha waa barashdaa Turjumaha Helsinki talaado Haddiise uu uga gudbo saamaynta falaha lafalihiisa sida: Waa inse hortooda carqbiga diidmo xaraf ama magac ama fal ama diido iyo dhawaaqto sida: Weerta magaca ah waxay ka kooban tahay yeelaha iyo sheegtada sida: Kolkii aad barato falalka makordhaha iyo kordhaha, waxaa kuu fududaanayso inaad ka raadsato eraygaad doonayso cadabiga carabiga iyo adigoo raacaysid labadan arrin ee soo socda: T Xiriiriyaalka wadaaga ah waana shan: Casharkanku waxa uu ku sabsanyahay salaanta iyo Barashada luuqada carbiga ee lagu hadlo.
Waa magac si gooni wax loogu yeero sida: Haddii aad xiiseyneysid kitaabkan oo aad dooneysid inaad ogaato sidii lagu heli lahaa, iyo haddii aad ku aragtid khaladaad xagga tarjamada ah, Eebbe kaliya ayaa dhamaystirane ha kaa abaalmariyo.
Waxaana ku carabifa jiraa markuu soo baxo tarjamadan naxwaha ah, ka dib caraabiga soo saaro tarjamada qaamuuska carabiga oo kooban, hadduu Eebbe yiraahdo. Xarfaha meeleeyaasha waa toban iyo toddobo xaraf: Magacyadase aan qaadan labashaqlanaha waa sida: A Somali man held in a terror probe in Italy has denied being an imam.
Waxaan ugu dambayntii Eebbe ka baryayaa in uu aniga “turjubaanka”, qoraaga naxwahan iyo intii carabiva caawisayba uu miisaanka wanaagyadeena noogu daro maalin aysan xoolo iyo caruur waxba tarayn.
Ka xarafkiisa hore isbedela waxaa la hoosdhabayaa xarafkiisa labaad ee joogtada waxaa laga tuurayaa woowgiisa markuu yahay joogtada iyo fartada sida: